Tag: fanarahana maso | Martech Zone
Ny mailaka rehetra izay alefa avy amin'ny boaty mailakao dia fotoana iray ara-barotra. Na dia mandefa ny mailaka amina mpanjifa aman-taonina aza izahay dia mandefa mailaka 20,000 hafa koa amin'ny fifandraisana isan'andro eo anelanelan'ny mpiasa, ny mpanjifa, ny vinavina ary ny matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe. Ny fangatahana ny rehetra hanisy sora-baventy hampiroboroboana taratasy fotsy na webinar ho avy dia mazàna dia mandeha amin'ny fahombiazana kely. Ny ankamaroan'ny olona tsy miraharaha ny fangatahana fotsiny, ny hafa manelingelina ny rohy,
Neuro Design dia saha vaovao sy mitombo izay mampihatra hevi-baovao avy amin'ny siansa saina hanampiana amin'ny famolavolana endrika mahomby kokoa. Ireo fomba fijery ireo dia azo avy amin'ny loharano roa lehibe: Ny fitsipika ankapobeny amin'ny fanao tsara indrindra Neuro Design izay nalaina avy tamin'ny fikarohana akademika momba ny rafitry ny fahitana ny olombelona sy ny psikolojia momba ny fahitana. Anisan'izany ireo zavatra toa ny faritra eo amin'ny sehatry ny fahitana antsika izay mora tohina kokoa amin'ny fanamarihana ireo singa hita maso, ka manampy ireo mpamorona hamorona
Ho an'ny famoronana dia azoko antoka fa misy olona ao anatiny mikiakiaka azy ireo ho hafa noho izay ary aza manangana tranokala toa ny hafa sy mihetsika toa ny olon-drehetra. Amin'ny fomba fijery marketing, na izany aza, efa nampianatra ireo mpitsidika anay izahay nandritra ny folo taona izao ny amin'izay antenaina amin'ny tranonkala iray sy ny fomba hitetezana azy mahomby. Amin'ny maha-mpampiasa anao dia tsy misy mahasosotra anao toy ny manandrana mitady ny mombamomba ny fifandraisana, tsindrio miverina amin'ny pejy fandraisana, na scan
Asabotsy, Aogositra 18, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Betsaka ny orinasa tsy mandeha tsara amin'ny Internet noho ny hatsaran'ny tranokalany. Ny famolavolana dia mety ho iray amin'ireo fampiasam-bola ambany indrindra azonao atao, indrindra satria sarotra be ny refesina ny fiverenana. Tokony hampiasa vola sy hampiasa vola be ianao alohan'ny hahitanao ny fahombiazan'ny tranokalanao. Ity infographic ity, ny Herin'ny fahatsapana voalohany, dia miresaka ny maha-zava-dehibe ny fahatsapana voalohany. Hevi-dehibe sasany - voalohany